Sidee Loo Aasayaa Feedhyahankii Adduunka, Marxuum Muxammed Cali ?Daawo Muuqalka Iyo Sawirada | Berberatoday.com
Sidee Loo Aasayaa Feedhyahankii Adduunka, Marxuum Muxammed Cali ?Daawo Muuqalka Iyo Sawirada
Louisville(Berberatoday.com)-Kumanyaal ku nool magaalada Louisville ee Kentucky ee Dalka Maraykanka, ayaa macsalaameyntii ugu dambeysay siiyay feedhyahanka caanka ahaa Muxammed Cali oo Alle u naxariistii lagu aasayo Magaalada Louisville, ka dib markii uu toddobaadkii hore geeriyooday isagoo da’diisu tahay 74 jir.
Naxashka ciyaaryahanka saddexda jeer ku guuleystay horyaalka miisaanka culus, ayaa magaalada Louisville oo uu ku dhashay la dhex mariyey, iyadoo gaadhigii lagu siday Meydkiisa ay dabooleen ubaxyo ay ku tuurayeen dadka taagnaa waddada dhinaceeda.
Gawaadhi gaadhaya 17 oo ah nooca loo yaqaan Limonsiiga, ayaa lagu dhex mariyey Jidadka ugu waaweyn Magaalada oo ay ku jiraan gurigii uu ku dhashay Alle ha u naxariistii feedhyahanka iyo xarunta Hiddaha African Americanka oo ku yaalla Magaaladaasi.
Socodka, ayaa ku dhammaan doono aas gaar ah. Kaddibna waxaa garoon kubbadda cagta lagu qaban doonaa tacsi guud oo dhammaan, waxaana ka qayb-galaya boqollaal Qof oo Aaminsan Diimo kala duwan, laakiin waxa ugu mudan Diinta Xaqa ah ee Islaamka oo ay aaminsan yihiin Dadka Meydkiisa sida isla-markaana aasaya.
Sawirrada laga soo qaaday Janaasada Marxuumka, ayaa waxa ka dhex muuqda Madaxweynaha Turkiga oo uu garabka u saaran yahay Nasashka Maxruumku ku jiro.